Uchwepheshe we-Semalt Ukhuluma Ekusesheni kwezwi - Impact On SEO
Izici zokusesha ngezwi zinomthelela ohlakaniphile ekusebenziseni injini yokusesha kodwa qhubekaukwandisa ukubaluleka ngaphezu kweminyaka. Kuthiwa ukuthi imibuzo yezwi iyaqhubeka ihlonishwa nomphakathi uma kuqhathaniswa nebhukwanaukuthayipha kwemibuzo ebhokisini lokucinga le-smartphone.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelele Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ucacisa ukusesha ngezwi kanye nokubaluleka kokusebenza kwe-SEO - nationwide asset services inc phoenix az.
Kuyini ukusesha ngezwi?
Ukukhuluma imiyalo edivayisini nethemba lokuthola impendulo yilelizwisesha. Izinkampani eziningi zedijithali zobuchwepheshe zedijithali ziqhubeka nokufaka izici zokusesha ngezwi ezizimele kumadivayisi wabo. Izibonelo zifaka "Ok,I-Google "ye-Google, i-" Siri "namadivayisi we-Apple," i-Cortana "yi-Microsoft," i-Alexa "ku-Amazon, ne-" Bixby "ye-Samsung.
Ngaphezulu kwesigamu inani lokusesha kwe-Google livela kuma-smartphone. Kokula, amaphesenti angamashumi amabili awo abuyele emuva emiyalweni yezwi ngaphandle kwabasebenzisi abathinta izikrini zabo. Njengamanje, ukuseshwa kwezwi kuya kwesishiyagalolunye nanhlanuamaphesenti olimi lwesiNgisi, okubenza kube nenembile kakhulu. Ngokususelwa ekutholeni kwe-Google, kuyalingana nokuqashelwa kwezwi lomuntuukunemba.
Isizathu sokufuna ukuphakama kwezwi ukusetshenziswa okukhudlwana kwe-digital homeabasizi abane-interfaces encane. Isibonelo, i-Amazon Echo's Alexa ne-Google's Home idivaysi incike kuphela kwizicelo zomlomo kanye nemiyalo..Bonazombili zijabulisayo futhi ziwusizo, yingakho abasebenzisi abaningi bevame ukwakhiwa okunamathiselwe okufana nesilwane kubo okwenza ingxoxo ibe yendalo yemvelo.
Ukusesha kwengxoxo kuphakathi kwezimo eziphawulekayo ekuthuthukiseni injini yokuseshangamaphesenti angu-70 yawo yonke imibuzo yokucwaninga equkethe ulimi lwemvelo. Abantu bakhuluma namadivaysi abo okucinga nge-digital ngendlela efanayobuza imibuzo eqondiswe kwabanye abantu.
Ukusesha ngezwi Ukubaluleka kokusesha kwe-Google
I-Google iyaqhubeka nokuthuthuka okukhulu ekusesheni okukhulumisana, okuvela kuyoukucinga ngezwi, futhi ngenxa yalokho ukuphendula imibuzo. Kufunda ukuqaphela nokuhumusha amagama okusetshenziswa komuntu ukukhipha umgomo womsebenzisifuthi ulethe imiphumela efanele kakhulu.
Isibonelo, esimweni i-Google ithola imibuzo emithathu yokucinga efanayongokuphathelene nokuthi ungathenga izicathulo, kufanele ulungise imiphumela yosesho ngokusekelwe ekuhlosweni komgomo wamakhasimende. "Ngingayitholaphi izicathulo?" yiqinisoisicelo. "Kufanele ngithenge kuphi izicathulo" yimibuzo esekelwe embonweni. "Ukuphi ukuthenga izicathulo" kuhlanganiswa kwemibono kanye namaqiniso, okwenza kungathathi hlangothiisenzo esibonisa injongo. Lokhu kungezwani kubonisa ukuthi ukuhlukahluka, inhloso ngemuva kokuhlukahluka komunye, kanye nokukwazi ukukhonza okuqondileImiphumela inegalelo elibalulekile kuncazelo yokuthi i-Google ivela ekusesheni.
I-Google inezinye izimpendulo eziqondile kwamanye amacala. Inhloso ye-Googleukusebenzela njengesitolo esisodwa sokubuyisa imiphumela nokuqondisa abasebenzisi ekhasini eliqondile eliqukethe ulwazi oluceliwe. Kuyafanaenikeza impendulo eyodwa ecacile, yilokho uSiri noma i-Alexa abakwenzayo lapho abasebenzisi bebabuza imibuzo.
Amabhizinisi nezingosi ze-e-commerce besaba ukuthi amakhadi okuphendula ayingozi kakhuluinani lemoto esiteshini kanye nesilinganiso sokuchofoza. Kungase kube yiqiniso, kodwa amakhadi okuphendula alapha ukuze ahlale kanye nenketho engcono kakhulu yamabhizinisi,ukuphoqa ukuncintisana nabo noma ingozi yokuthola abaphikisana nabo.